Ciidamada Huwanta Ee Hareereeyay Kismaayo Oo Awoodi Waayay Inay Galaan Gudaha, Dilal Qorshaysan Oo Ka Bilaabmay Magaalada Iyo Maraykanka Oo Ka Hadlay Xaalada Ka Taagan | Araweelo News Network (Archive) -
Kismaayo(ANN)Ciidamada huwanta ah ee hareereeyay Magaalada Kismaayo, ayaa awoodi waayay inay gudaha u galaan magaaladaa oo ay shalay ka baxeen kooxda Al-shabaab, waxaana jirta cabsi soo food saartay bulshada. kadib markii dilal qorshaysan
maanta ka dhaceen halkaa. Afhayeenka ciidamada ururka Raaskaambooni ayaa sheegay in ciidamadii huwanta ahaa joogaan kontoroolada magaalada laga galo iyo kuwa laga baxo oo aad magaalada ugu dhow.
Warar kale oo ka imanaya magaalada ayaa sheegaya in ugu yaraan Afar qof oo ay ku jiraan nabaddoono ka dhaceen halkaas. sidoo kale Sarkaal ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ka hawl gelaya ayaa la sheegay inay joogaan meel 5KM u jirta Kismaayo.
Wararku waxay sheegayaan in dilalka maanta ka dhacay magaalada ay ahaayeen kuwo lagu bartilmaameedsaday ugu yaraan afar qof oo rayid ah oo u badan rag odayaal magac leh, iyadoo aanay jirin ciidan hadda gacanta ku haya magaalada, taas oo cabsi ku abuurtay dadka deegaanka oo bilaabay inay ka qaxaan magaalada. sidoo kale
Dadka magaaladan deggan ayaa sheegay in xarumihii al Shabaab ka baxeen ay bililiqeysteen dhallinyaro deegaanka ah. Ciidamada huwanta ah oo magaalada hareereeyay shalay ayaa ka cabsi qaba inay gudaha u galaan magaalada oo mudo dheer ay ka talinayeen Al-shabaab.
Dhinaca kale Dawlada Maraykanka ayaa ka hadashay ka bixitaanka Al-shabaab ee Kismaayo. Kaaliyaha xog’hayaha arrimaha dibbadda Maraykanka Johny Carson oo saxaafadda kula hadlay magaalada Washinton ayaa sheegay in dawladiisu aaminsan tahay in awoodii Al-Shabab si weyn loo wiiqay, hase ahaatee ay willi jirto awood ay u leeyihiin fulinta weeraro kale.
Johny Carson waxaa uu sheegay in dagaaladii ka dhacay gobolka Jubbadda hoose si weyn loogu wiiqay awoodii Al-Shabab, isagoo xusay in magaalada Kismaayo ay ahayd meeshii ugu weynayd ee gacantooda ku hadhsanayd.
Kaaliyuhu waxaa uu xusay in Xarakadda Al-Shabab ay ahmiyad ciidan iyo dhaqaale ay ku haysatay magaalada Kismaayo, balse ay waayeen hada, waxaana uu xusay inay qorshaha ugu jirto in magaalada Kismaayo ka fuliyaan weeraro uu ugu yeedhay kuwa argagixisinimo ee naf-hurnimada ah.
“Al-Shabab hadda ma laha awood ciidan oo wax difaaci karta laakiin waxay sameynayaan waa inay weeraro ka geystaan gudaha Soomaaliya, taas oo iyaduna ah halis jirta” ayuu yidhi Johny Carson kaaliyaha xog’hayaha arrimaha dibbadda dawlada Maraykanka, wuxuuna carabka ku dhuftay inaan l si buuxda loo odhan karin waa laga adkaaday Xarakadda Al-Shabab.” ayuu yidhi. kaaliyaha xoghyaha maraykanka.